CROWN Consulting Limited | Crown Education
HomeCrownAbout UsCROWN’S AWARDSStudent TestimonialsServicesUniversitiesStudy in HOLLANDStudy in MALAYSIAStudy in AUSTRALIAPre MASTERSStudy in UKStudy in USAStudy in SingaporeStudy in NEW ZEALANDGUIDE TO UK UNIVERSITIESStudy in THAILANDUseful InfoUnaccredited InstitutionsPathway ProgramsGlobal Assessment CertificateNCUK International Year OneGAC Pathway UniversitiesGAC in MyanmarNewsGalleryPhoto GalleryContact UsEDU EXHIBITION 2017FAQs CROWN Consulting Limited
CROWN Education သည် CROWN Consulting Limited အောက်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါCROWN Consulting Limited အနေဖြင့် အင်္ဂလန်၊ သြစတြေလျ၊ အမေရိကန်မှ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့် ပူးပေါင်းလျက်မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကပညာရေးကဏ္ဍအတွက် အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပညာရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှမိတ်ဆွေများကိုလေးစားစွာဖြင့်အသိပေးအပ်ပါသည်။.(၁) မြန်မာနုိုင်ငံအတွင်းအဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍမှ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ၊အစိုးရကျောင်းများအတွက်အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။သင်ကြားပို့ချပေးမည့်ဘာသာရပ်များ၊ ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်ဒီဂရီများအတွက်နုိုင်ငံတကာကျောင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းများပါဝင်ပါသည်။.(၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ၊ HND, City and Guilds, LCCI (3), ABEကျောင်းများနှင့် အခြား အင်္ဂလန် အသိအမှတ်ပြု Certificate, Diplomaများသင်ကြားပို့ချပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် နုိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အဆင့်မြင့်ကောလိပ်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။.(၃) မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သြစတြေလျ၊ အင်္ဂလန်၊ အသိအမှတ်ပြုဒီပလိုမာပရိုဂရမ်များဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချနုိုင်ရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများပါဝင်ပါသည်။.အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို james@crown-education.com သို့ အီးမေးပေးပို့မေးမြန်းနုိုင်ပါသည်။ User login